FAA inoderedza kuchengetedzwa kwekutarisirwa kunoitwa neMexico Federal Civil Aviation Authority
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » FAA inoderedza kuchengetedzwa kwekutarisirwa kunoitwa neMexico Federal Civil Aviation Authority
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Dai 25, 2021
Chiyero cheIASA chinoderedza kuchengetedzwa kwekuchengetedza kunoitwa neMexico Aviation Authority kubva kuChikamu 1 kusvika kuChikamu 2 neFederal Aviation Administration.
Chiito cheFAA chine chekuita chete neAFAC, uye uku hakusi kuongororwa kwevatakuri veMexico
Yekuchengetedza yeVolaris inoramba isina kuchinja uye inoenderana neyakanakisa indasitiri zviyero kubva kune ese ekuchengetedza uye ekuchengetedza nzvimbo
Volaris 'codeshare mudiwa Frontier inobvisa kodhi yayo kubva kundege dzinoshandiswa naVolaris
Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV (Volaris) - yendege yakachipa-inodhura inoshumira Mexico, United States of America neCentral America, inozivisa kuti Dhipatimendi Rekufambisa reU.S. Federal Aviation Administration yeUnited States of America (FAA) nhasi yaona kuti chengetedzo yekuchengetedza yakashandiswa neMexicoan Federal Civil Aviation Authority (AFAC) haiteedzere zvakazara zviyero zveInternational Civil Aviation Organisation (ICAO) uye yakadzora huwandu hwenyika hwekuchengetedza kubva kuChikamu 1 kusvika kuChikamu 2. Pasi peInternational Aviation Safety Assessment. (IASA) chirongwa, iyo FAA inoongorora vezera ravo zviremera zvekuona nezve ndege kuti vaone kana zvirongwa zvavo zvekutarisa zvinoteera zvinongedzo zveICAO.
Iyo FAA chiito chine chekuita chete neAFAC, uye uku hakusi kuongororwa kwevatakuri veMexico. Volaris'chengetedzo nhoroondo inoramba isina kuchinja uye isu tinotenda kuti inoenderana neyakanakisa indasitiri zviyero kubva kune ese ekuchengetedza uye ekuchengetedza nzvimbo. Volaris yakazvipira kuchengetedzeka kwevafambi vedu.
Ikozvino maVolaris masevhisi acharamba aripo. Nekudaro, panguva iyo iyo AFAC inogadzirisa zviwanikwa zveFAA, masevhisi matsva nemigwagwa hazvigone kuwedzerwa, uye Volaris haizokwanise kuwedzera ndege nyowani kune ayo mashandiro eFAA. Zvisinei, ngarava dzaVolaris dzinogona kuramba dzichikura, sezvo chiitiko cheFAA chisingatenderi Volaris kubva mukubatanidza chero ndege yekuwedzera muMexico Air Operators Chitupa, uye haitadzise Volaris kuendesa ndege dzakadai kumisika yeMexico neCentral America.
Pamusoro pezvo, shamwari yedu yemakodhi Frontier inobvisa kodhi yayo kubva kundege dzinoshandiswa naVolaris, kunyangwe vatengi vachine mukana wekutenga ndege kubva kuVolaris neFrontier kuburikidza nemawebhusaiti emakambani.
Volaris anonzwisisa kuti AFAC yanga ichishanda padhuze neFAA kugadzirisa chero hunyanzvi kana hwekutonga nyaya. Volaris ichatsigira kuyedza kwevakuru vezvematongerwo enyika nechinangwa chekudzorera chiyero chekuchengetedza cheMexico kuChikamu 1.